Namuhla, kunezindlela eziningi zokugcina nokubuyisela ubuhle nempilo yezinwele. Ukuchichima kwemikhiqizo ehlukahlukene yokwenza izimonyo kanye nezobuchwepheshe kukukwenza ucabange ngokungathí sina futhi wenze isinqumo esifanele ngokuqondene nalokhu noma lokho okulungisa. Kodwa ukunikeza izinwele uhlobo oluthile lwemikhiqizo yezimonyo akwanele, ngoba banikeza kuphela umphumela wesikhashana, okugcinwa kuphela kuze kuhlanjululwe ikhanda elilandelayo. Kulesi simo, ukuthola umphumela obonakalayo, kufanele uphenduke kubachwepheshe. Namuhla sizokhuluma ngokuthi ngabe izinwele zezinwele ziwusizo yini izinwele zokusika ngezikhali ezishisayo.
Abanikazi bezinwele ezinde noma abesifazane, abakhula izinwele zabo, abavakashi abangavamile ababheki bezinwele. Bakholelwa ukuthi akufanele uhambe kumuntu wezinwele noma uya kuye njalo ezinyangeni eziyisithupha. Eqinisweni, uma ukhula noma izinwele ezinde zigawulwa kancane kancane kanye nezinyanga ezimbili, zilahlekelwa yizinkathazo, ziphele futhi zihlukaniswe. Ngakho-ke, ukubukeka kahle kwezinwele zakho kuyadingeka ngosizo lokunciphisa. Ukunciphisa izikrini ezivamile kukuvumela ukuthi unqume ukuphela kwezinwele, kepha akuqinisekisiwe futhi emva kwesikhathi sek sekyaya futhi.
Yini esikwaziyo mayelana nalokhu kukhanda?
Abantu abaningi bezwa ngaleyo nsizakalo ngobunono be-salon nezinwele zokugqoka izinwele, njengokunquma isikebhe esishisayo, mayelana nomphumela omuhle owenzayo. Kodwa bambalwa bayazi ukuthi lokhu kwenzeka kanjani. I-Haircut "isikebhe esishisayo" senziwa ngale ndlela elandelayo: inkosi iguqula izinwele zezinwele zibe yizintambo futhi inqamule ukuphela kwehlukaniso. Lona umsebenzi okhandla kakhulu futhi oqaphileyo, njengoba kubalulekile ukunciphisa iphuzu lenswele ngayinye ngakho-ke ukunquma izinwele, kuye ngokuthi ubude bezinwele, kuthatha isikhathi esiningi. Ngaphambi kokuqala kwezinwele, izinwele ziphathwa ngethuluzi elikhethekile eliqukethe zonke izakhi ezibalulekile izinwele, amavithamini nama-amino acids. Ngokungafani ne-mask evamile, le remedy ayihlanzwa, kodwa ihlala izinwele futhi inondla zonke izinwele ezivela ngaphakathi. Uma ufaka izilinganiso zezinwele, izinto eziwusizo zihlala phakathi kwezinwele zonke, ezenza zibe zihle futhi ziphilile. Ngokusetshenziswa "isikebhe esishisayo" kwenziwa kanye nezinwele zokukhanda. Lokhu kuwusizo ikakhulukazi izinwele ezinemibala ehlukahlukene nezinwele, kanye nezinwele ezinezingqikithi zamakhemikhali. Ngaphezu kwalokho, lapho wenza izinto eziyinkimbinkimbi zezinwele zokufakela izinwele, kusetshenziselwa isithuthuthu esishisayo, ngezenzo ezenziwa ukuze kufinyelelwe umphumela ongaqediwe.
Kumele uqaphele ukuthi ukukhanda izinwele nge-scissors yalolu hlobo kufanele kwenziwe kuphela ngumchwepheshe owazi ukuthi angayisebenzisa kanjani futhi wazi konke ubuchwepheshe benqubo. Uma izinga lokushisa lingakhethi kahle, futhi likhethwe ngohlobo ngalunye lwezinwele ngabanye - awukwazi ukuthola umphumela olindelekile nomphumela oyifunayo.
Izinzuzo nokuqeda ukusika ngezikhali ezishisayo.
Wonke umuntu uyazi ukuthi izinsimbi ze-curling, ama-curlers kanye nezinsimbi eziqondisayo zidala umonakalo omkhulu empilweni yezinwele. Ngenxa yethonya lokushisa okuphezulu, alahlekelwe umswakama, abe omisiwe kakhulu futhi aqale ukunqunywa, njengoba izinwele ziba zingenwe kahle futhi zondliwe. Ngakho-ke, abantu abaningi bacabanga ukuthi "isikebhe esishisayo" kukhona okufanayo futhi ukusetshenziswa kwabo kunomthelela omubi ekubukeni nesimo sezinwele. Ngenxa yalokho, lo mbuzo uvame ukuvela: ingabe izinwele ezishisayo "ezikwephuzayo" ziyingozi? Kodwa into yukuthi ukusika ngesisindo esishisayo akuyona nje izinwele ezenza izinwele zibukeke kahle futhi zibe nezinwele ezimnandi zesitayela, kodwa futhi nenqubo eyingqayizivele yezinwele ezinomphumela wokwelapha. Umphumela wokusika "isisindo esishisayo" uyabonakala ngokushesha.
Emva kwenqubo yokuqala, izinwele ziba bushelelezi futhi zilalele, zihlukaniswe kakhulu futhi zilula kakhulu ukulala, kuyilapho zigcina izinwele ezinde. Umphumela wokwelashwa ngemuva kwalokhu kukhanda izinwele kutholakala ngemuva kwezinqubo ezimbili kuya kwezintathu, futhi ngemva kwezinwele zokukhwabanisa ezine noma ezinhlanu nge "izikhali ezishisayo" ubukhulu bezinwele buphindwe kabili, njengoba bufana nobunzima ngobude babo bonke. Into ewukuthi izikhisi ezishisayo zifaka uphawu lwentwele ngayinye, kanti zigcina inani elidingekayo lomswakama kanye nezakhi ezisiza ukuthuthukisa izinwele futhi zihlinzeke ngokuvikeleka ezivela ngaphandle: ilanga nomoya, kusuka emoyeni oshisayo uma usomile ngomswakama wezinwele, usebenzisa izindlela ezihlukahlukene for styling. Umphumela wale nqubo uhlala cishe izinyanga ezimbili. Ukuze ulungise umphumela futhi ususe inkinga yezinwele ezihlukaniswe isikhathi eside, kubalulekile ukuthi wenze izinqubo ezintathu kuya kwezine ezinyangeni eyodwa kuya kwezinyanga ezimbili, njengesikhathi lapho izikwele zezinwele zihlukanisa futhi izinwele zilahlekelwa ukubukeka kwazo okubukeka kahle nokukhanya okunempilo.
Ubani odinga ukunqunywa ngezinwele ngesisisi esishisayo?
Ukusika "isikebhe esishisayo" kunconywa kubo bonke abadlali ukuba bajabule futhi bawusizo ngesikhathi esifanayo: i-hairdo ephathekayo nezinwele ezinhle ezinempilo. Esikhathini se-thermo-scissors, izinga lokushisa lokusebenza likhethwe yi-minicomputer, elinquma isakhiwo sezinwele futhi ilungise ukushisa okudingekayo kwamanzi, ngokucabangela uhlobo lwezinwele zomuntu ngamunye. Njalo isikhathi i-minicomputer iqapha futhi igcina izinga lokushisa ezingeni elidingekayo. Uma kusetshenziselwa isikebhe esivumelwaneni sokusika, isifomu sokugcina sezinwele kumele sinikezwe "isikebhe esishisayo". I-master professional ngeke isuse amathiphu wezinwele esivele aphuziwe ngezikhali ezivamile, njengoba lokhu kunganaki yonke imizamo yangaphambilini. Le master isebenzisa "isikebhe esishisayo" kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni kwezinwele. Umphumela uzobonakala ngokushesha ngemuva kokuqedwa kwenqubo yokuqala. Izinwele ziba nempilo enhle futhi zikhanya, zithole ubuhle bemvelo.
Ngakho-ke, ukunqunywa ngezinwele nge "isisindo esishisayo" akulimazi izinwele, kodwa ngokuphambene kuyawusizo kubo, ngoba ngenxa yokwakhiwa komsoco okusetshenziselwa ukunqunywa izinwele, izinwele ziqiniswa futhi zigcwala umswakama namavithamini ezidingekayo ukunikeza amandla nokukhanya okunempilo. Ama-nutrients aphethe ukugcwalisa izinwele ngaphakathi, ukugcina ibhalansi yabo yemvelo isikhathi eside.
Izitayela zezinwele ezinamabhange - umthamo we-autumn-2016
Dala isithombe esiphelele: i-styles best kwi-2016 yokugcina
Ama-toothpastes ama-Whitening: isici
Indlela yokukhetha umtholampilo wokuhlinzwa epulasitiki
Uju oluwusizo ukuze kuzuze ubuhle
Kusha kusukela eshaweni: isitayela esinomphumela "wet" - isenzo-2016
Ukuhlalisa izinwele ukukhula
Amakhekhe ama-mini nge-sinamoni namafutha ashubile
Kungcono kakhulu ukulala owesifazane okhulelwe
I-cervicitis enempilo futhi engapheli: izimpawu, ukuxilongwa, ukwelashwa
I-carrot amakhekheki nge-coriander nommbila
Indlela yokuhlala zokupheka ezincane, zabantu
Yimiphi imidlalo ongayidlala nengane?